Kitra – «Can 2019»: hanohitra ny Gineanina ao an-taniny ny Barea | NewsMada
Kitra – «Can 2019»: hanohitra ny Gineanina ao an-taniny ny Barea
Hifantoka atsy Malabo, renivohitr’i Ginea Ekoatorialy avokoa ny sain’ny rehetra, indrindra fa ny mpankafy baolina kitra, amin’ity asabotsy ity. Hifandona amin’ny Nzalang Nacional ao an-taniny, ny Barea de Madagascar.
Hotanterahina, anio ao amn’ny kianja Malabo Stadium ao Ginea Ekoatorialy, ny lalao mandroso, hiadian-toerana, amin’ny Can 2019, taranja baolina kitra. Fihaonana hikatrohan’ny Nzalang Nacional sy ny Barea de Madagascar. Efa tonga any an-toerana, ary efa vonona hiatrika ny lalao ny Barea.
Araka ny fantatra, matahotra ity lalao hifandonany amin’ny Barea de Madagascar ity, ry zareo Gineanina. Vokatr’izay, nanafatra ireo mpilalao avy any Eoropa, ny mpanazatra. Anisan’ireny, i Emilio N’Sue, lohalaharana ao amn’ny Birmingham City Angletera, izay mpamono baolina gaigilahy, amin’ny fifaninanam-pirenena anglisy. 28 taona izy ary mirefy 1, 78 m. Ankoatra izay, saika mpilalao avy any Espaina avokoa ny ankamaroan’ireo hajoro voalohany. Ho tazana ao amin’ny vodilaharana, i Carlos Akapo, milalao ao amin’ny Huesca. Toy izany koa ireo irakiraka mirahalahy, Pablo Ganet, avy ao amin’y UD San Sebastan ary i Josete Miranda, ao amin’ny Getafe CFB ary i Iban Salvador, ao amin’ny Celta Vigo B, izay mitana ny toeran’ny mpanafika. Zokiny indrindra ao amin’ity ekipan’ny Nzalang Nacional ity, i Rui Fernando de Gracia, izay efa 33 taona, milalao any Hibernians Malte. Vodilaharana, no misy azy. Zandriny indrindra kosa i Diosdado Mbele, izay vao 19 taona monja, ary milalao any amin’ny klioba AC Kajani.
Tsy mifanalavitra amin’izany koa ny Barea de Madagascar, saika mpilalao mpila ravinahitra ny ankamaroany. Na izany aza, tsy ho anisan’ireo hiatrika ity fihaonana mandroso ity, i Metanire. Ankoatra ireo mpilalao malagasy avy any Eoropa, misy ireo telo mirahalahy, avy eto an-toerana, manatevina ny Barea dia i Toby sy i Mario ary i Leda.
Tsiahivina fa hanomboka amin’ny 4 ora 30 mn folakandro, ora eto Madagasikara, ny fihaonan’ny roa tonta. Ny lalao miverina kosa hatao eny Vontovorona, ny talata 16 oktobra, ho avy izao.